Android ayaa galisay isgaarsiinta mobile siiyey in ay caan ah ayaa si wayn u kacay sidii mid ka mid ah nidaamka qalliinka waaweyn ee telefoonada badan smart maanta. Telefoonada waxa ay qayb ka mid ah oo naga mid ah in ay ilaa xad in aan xitaa hayn xog xasaasi ah oo iyaga ku noqday. Dhumo files xogta aad ka Android sidaas waxay keeni kartaa in khasaaro ah oo muhiim ah, kuwaas oo Su'aashaan ayaa sida aan bogsan xogta sida?
1. qashinka Image & Video Celinta
Tani waa App ah siinaya user a fursad ay dib ugu hadhaysaa ilaa xogta ay halka sidoo kale iyaga oo la siinayo fursad uu ku soo kabsado xogta in mid ka mid ah si qalad ah tirtirtaa ka aalad android. Software wuxuu u shaqeeyaa sida bin recycle ah ee PC ee dareenka ah in dhammaan faylasha aad tirtirto tegi doonaa software ah. Waxaa caadi ahaan si fiican u la shaqeysaa video kale iyo sanamyo la laakiin waxa ay sidoo kale la waraaqaha, HTML, iyo files APK shaqeeyaan. Files waxaa la gacanta tirtiri karaa ka xasuusta software ama xitaa lagu hagaajin karo in ay u faaruqiso xasuusta muddo go'an ka dib.
Recovery 2.GT - Undelete, Soo Celinta
Tani waa codsi kale software oo keena kabashada xogta tayada dadka isticmaala in madal android. App ayaa kaa caawin doona inay soo dhiciyaan noocyo badan oo files iyada oo baaritaan nidaamka qalabka. Qalab wuxuu taageeraa qaabab dhowr ah ay ka mid yihiin nidaamka file AT, EXT3, EXT4. Qalab kuu ogolaanaysaa inaad ku eegaan files ka hor soo kabashada iyo sidoo. Qalab ay taageertaa qaabab faylka soo socda: MP3, MP4, AVI, Mpg, MOV, regelingen, ZIP, rar, GZIP, APK, EXE, PDF, DOC (X), PPT (X), Excel (X), JPG, PNG , GIF, BMP. Quruxda waxaa weeye in ay tahay oo lacag la'aan ah!
Ladnaansho 3.Undeleter Files & Data
Tani waa mid ka app android weyn oo sameeya oo Sixira idiin mar kasta oo aad lumiso nooc kasta oo xog ka telefoonka. Waxa kale oo ay s aad u boosaska badan la file systems- Waxa ay taageertaa soo diyaariyeen balaadhan oo ah nidaam faylasha. Software ayaa sidoo kale waa wax iska extensible in boqortooyadii reer nooca xogta in ay soo kabsadaan-u soo kabanayo karaa qaabab kala duwan sida qalab kabashada GT. Waxa uu baaritaanku aad disk si loo hubiyo in ay soo kabanayso kasta oo macluumaadka lagu kaydiyo ee gudaha ah, OTG Buur, ama kaarka SD. Waxaad ka heli kartaa app ah oo lacag la'aan ah ee Google Play Store.
Tani waa software in Gaarna fulisaa Trash ee telefoonka aad android. App ayaa sidaas maamushaa files via sahamiyayaal file xidhiidha nidaamka. Mar kasta oo file ah waa la tirtiraa nidaamka android, file waa u diro folder app in dukaamada. Haddii tusaale ahaan aad tirtiray file ah oo si qalad ah oo aad rabtid inaad u soo kabsado, markaa faylka doonaa si fudud loo soo celiyay ka folder app. App waxaa loo qaybiyay karaa in ay ka shaqeeyaan sida Qashinka dhaqanka iyo haamaha recycle iyo xitaa ka fiican tahay in! Waxaad sameyn kartaa waxyaabo sida configuring files in loo soo diro bin recycle ah in kaliya doorashada hal
Haddii aad leedahay telefoonka ah rujin, markaas app this idiin samayn doono. Haddii ay dhacdo in aadan haysan wax fikrad ah waxa rooting waa markaas marka la eego fudud, waa geedi socodka u ogolaaday in dadka isticmaala OS ah android mudnaanta xididka sidaas jidaynayey rakibo ee Chine oo u baahan mudnaanta full of nidaamka. Enough ee fikradaha rooting iyo aan aragno waxa app waxa uu helay in ay bixiyaan. Marka hore, waxaa muhiim ah in la ogaado in ay tahay aalad awood u dhisay kabsaday photos iyo video files. Tani waa in ay tilmaamayso waxa aan shaqo fiican ayuuna ka shaqeyn doonaan inay soo dhiciyaan noocyada kale ee files. App waa la jaan qaada qalabka socda android 2.2 iyo sare. App ayaa sidoo kale waa lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan.
Chine doonaan shaqada sida caadiga ah kuu sameeyo, laakiin haddii ay dhacdo ay diido, markaas waxaad u baahan doontaa codsiga computer inuu ka soo kabsado faylasha aad. Qalab ugu fiican waayo, taasu waa ka soo kabashada Wondeshare Data software. Software ayaa loo heli karaa dadka isticmaala socda midkood Mac ama computer Windows ah. Qalab waxaa lagu heli karaa lacag la'aan ah sida tijaabo ah oo la khiyaar ah ee iibsigu waa in ay helaan xuquuq buuxda. Recovery xogta in qalab waxay u baahan tahay kaliya seddex talaabooyin fudud.
Tallaabo 1: Ku rakib Software iyo Connect Your Device
Tallaabada ugu horreysa waa in ay gashato in aad PC. Rakibaadda waa in uu ahaadaa quruxsan easy- oo dhan aad samayso waa in ay raacaan saaxir rakibo in idin Toosiya. Burcad software ah oo ay u joogaan in codsiyada in ka mid ah daaqadaha ama Mac. Markaas waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan telefoonka aad jeclaan lahaa inuu ka soo kabsado xogta tirtiray in si toos ah kombiyuutarka -using xadhig USB ah.
Talaabada 2: Recovery File Dooro iyo Scan
Tallaabada xigta waa in ay doortaan kabashada file ka mid ah arin doorashadii iyada oo interface user. Hel drive taas oo lagu kaydiyo telefoonka ka dibna riix on sahlo Deep Scan , ka dibna riix on Scan . Taas ka dib, waxaad u baahan doontaa in ay sugto software si ay u iskaan faylasha tirtiray.
Talaabada 3: Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan
Tallaabada xigta waa in ay hubiyaan faylasha aad rabto in aad markaas soo kabsado guji soo kabsado. Ha software ee aad ku eegaan waxa ku jira in la soo helay. Tani waxay si gaar ah faa'iido markii previewing sawiro aad kaliya haddii ay dhacdo aadan hubin magaca.
Qalabka sida xaqiiqada ah waa a taagan ka mid ah dad badan oo aad ka heli doontaa suuqa ka soo. Had iyo jeer dooran mar kasta oo aad leedahay ikhtiyaar ah, waayo, software xaqiijiyey. Xusuusnow raqiis ah in had iyo jeer waa mid qaali ah!
> Resource > Android > 5 Android App inuu kaa caawiyo inaad ka soo kabsado files tirtiray